Blackjack bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na kaadị egwuregwu na casinos - ala dabeere, online na mobile. Ị nwere ike igwu blackjack maka ezigbo ego na mFortune Mobile Casino. The game has simple rules that are easy to learn, ma ọ na-achọ nkà iji na-egwu ihe ịga nke ọma. Nke a na-eme ka blackjack ewu ewu na-amu amu, nakwa dị ka ọrụ egwuregwu.
Play Blackjack Ihe Anyị Na-atụ aro Casino
Olee otú igwu egwu Blackjack
Ị nwere ike igwu blackjack na mFortune Casino maka fun ma ọ bụ n'ihi ezigbo ego. Ị nwere ike idowe nzo ha nanị 10p.
Ebumnuche nke egwuregwu na nke blackjack bụ iji nweta a aka nso 21 karịa dealer, enweghị na-aga n'elu (bust). Ozugbo ị enịm gị nzo, ị ga-emeso abụọ kaadị ihu na dealer ga-emeso onye na kaadị ihu elu na otu kaadị ihu ala. The ọkpụkpọ ga now chọrọ ikpebi otú e si akpọ n'aka. Ị nwere ike iguzo na-akwụsị gị n'aka; see na-enweta otu ihe card; okpukpu abụọ ala na gị mbụ na nke abụọ kaadị okpukpu abụọ nzọ gị na-enweta otu ihe card; kewaa aka gị abụọ dị iche iche nzo ma ọ bụrụ na i nwere abụọ yiri kaadị gị mbụ na nke abụọ kaadị ma ọ bụ na-mkpuchi ma ọ bụrụ na dealer si elu-kaadị bụ ihe Ace.
All kaadị nwere a uru na ndị a ụkpụrụ na-kwukwara ọnụ na-eme na ngụkọta uru nke aka gị. Kaadị abụọ site iri-ha n'ajụghị ase; ihu kaadị nwere a uru nke iri na Aces nwere a uru nke otu ma ọ bụ iri na otu, dabere na uru nke ndị ọzọ aka gị. The kasị elu isi aka a maara dị ka Blackjack na nke a bụ a abụọ-kaadị aka esịnede ihe Ace na a kaadị kpọrọ na 10.
Ozugbo gị n'aka kwusiri (ị na-aga na na ma ọ bụ na ị na-eguzo), na dealer-arụ aka-ya, aka na-jiri ya tụnyere ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla Enwee Mmeri.
Ekwentị Casino Games | N'akpa uwe Fruity Ohere mepere